Ndangariro Foam Cushion yeWheelchair | KarmanHealthcare.com
musha / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya Zvishongedzo / Mawiricheya Makushoni / Memory Foam
Ndangariro Foam Makushoni Kune Wiricheya
Unogona kusarudza chinhu, kunyangwe iwe uchida imwe yakasimba memory memory foam cushion kana furo regel cushion. Kune zvakare zvigaro zvemawiricheya zvakasiyana chigaro sizes
Ergonomic Yekuyeuka Furo Chigaro chevhiri Zvigaro
Uyu mutsindo wakakwenenzverwa kuti unyore zviri nani chimiro chemuviri wako. Inogona kushandiswa seimwe kusheni kana chigaro, ndapota taura. Uyu mutsamiro wakagadzirirwa kurumbidza furemu dhizaini yeiyo Ergonomic mawiricheya, asi inogona kushandiswa pane chero chakaenzana upamhi cheya. Usakanganwa kuwedzera iyo Ergonomic Yakarongedzwa Ndangariro Foam Backrest yemubatanidzwa wekupedzisira wekunyaradza.
furo Mawiricheya Makuseni
Iyo Karman Hutano Chigaro chevhiri Kumusana Cushion furo rakaputirwa musana wemusana iyo inopa ekumusoro kumashure nyaradzo uye lumbar rutsigiro. Yakagadzirirwa kudzikisa marwadzo ekudzokera kumashure uye mhasuru kushushikana pawakagara kwenguva yakareba yenguva.
Wiricheya pamutsago inopa mushandisi hwaro kubva paanogariswa newiricheya kubva, ne nyaradzo, kumanikidzwa kuzorodzwa uye kudzivirira ulcer, kushamiswa kwekutorwa, uye inobatsira nekuenderana kwemashure kunatsiridza mushandisi basa. Isu tinokurudzira memory memory furo pamusoro peiyo yakawanda gel uye yechinyakare chipanji.